ခဏလေးပါ..လောကဓံရယ် – PoemsCorner
“ဘ၀” နဲ့ “ဗီဇ”
“ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” နဲ့ “သစ္စာတရား”
သူ့အတွက် ဟာသ တပုဒ်ပါ။
သူမအပေါ်ထားတဲ့ အကန့်အသတ်ကို သူချိုးဖျက်ခဲ့တာ
သူ ထိုနေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။
သူတို့ကို အပြာရောင် မှတ်ချက်တွေ
သူမ လောကဓံ မခံနိုင်တော့မှန်း
သူတို့ ရဲ့ ဆက်ဆံရေး
သူမ သူ့အပေါ် ခါးသီးစွာတုန့်ပြန်မှုတွေက
ဝတ္တရားဆန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုး တောင်
အချစ်စစ်မှာ ဟန်ဆောင်မှုကင်းရမယ်လို့ ပညာတ်ထားပေမယ့်
ထိုသူ စိတ်တွေကို မကြာခဏ
လူမှုရေးမှာ အစွန်းမရောက်အောင် ထိန်းတတ်တယ်။
သူလောက် ခြောက်သွေ့နေတာ မတွေ့ဘူး။
ဘဝဆိုတာ ဓါးချက်တွေမွှန်းထားတဲ့ အရှင်လတ်လတ်ငါးပဲ။”
ညဥ့်လည်မှာ သောက်သုံးတဲ့ စီကလက်တလိပ်သာသာ
လက်တစ်ဆစ်စာ ရယူမှုနဲ့ ရောင့်ရဲခဲ့သူပါ။
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ လေညင်းသာသာမှာ
မှတ်ချက်။ ။ ဤကဗျာ သည် ဆရာမောင်ချောနွယ်၊ ဆရာစိုင်းဝင်းမြင့်၊ ကို သက်ထွေး ကဗျာများမှ
In: ကဗျာ Posted By: finalmutation Date: Apr 20, 2011
ကျွန် မ က ရှင် သိ ခဲ့ တဲ့ မိန်း မ တစ် ယောက် မှ မ ဟုတ် တော့ တာ(written by ဂျမ်းစိန်မ)
ကြေးမုံ( ၂၀၀၁-ကြိုးညှိမရတဲ့ ဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့ရစ်သမ်မှ)
Leave comment9Comments & 340 views
By: May Kha at Apr 21, 2011
ဘ၀” နဲ့ “ဗီဇ”
By: genius.jinx28 at Apr 21, 2011
May Kha နဲ့genius.jinx28 ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
အခုကို တကူးတက..ကျနော့်ကဗျာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လာဖတ်ပေးလို့…:)
By: finalmutation at Apr 21, 2011
ပေးလိုက်တဲ့ commentက ဆက်ေ၇းဖို့. အားဆေးတစ်ခွက်ပဲလေ.
ကဗျာက ဖတ်ဖူးထားတာလေးတွေနဲ့ တော်တော်လေးကို တူနေတယ်..
လက်ဖမိုးကြားက လွတ်ထွက်သွား …
တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာတယ် .
သာလိကာလို ဝတ္တရားဆန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုး
မဖြစ်မနေဆက်ဆံရတဲ့အခါမျိုး မကြာမကြာထုတ်သုံးတယ် ..
By: april moe at Apr 22, 2011
ဟုတ်ပါတယ်…ဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ရတဲ့…… ကိုစိုင်းဝင်းမြင့်…ကိုသက်ထွေး…ဆီက နေကျွန်တော် ရင်ထဲ ရောက်ခဲ့တဲ့စာသားလေးတွေနဲ့..ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေနဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာပါ။ အဲ့ဒါမို့လို့..သူတို့ စာသားလေးတွေ ပြန်လည်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိုင်းဝင်းမြင့်တို့…ကိုသက်ထွေးတို့ ဆိုတာ ကျွန်တော် သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ တွေပါ။….အခုလို…ဝေဖန်အကြံပေးလို့လဲ april moe ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
By: finalmutation at Apr 22, 2011
ကို finalmutation ရှင့်.. အခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အစ်ကို့အနေနဲ့ စာသားတွေပြန်လည်ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထာတယ်ဆိုရင်လည်း အောက်ဆုံးမှာ မှီငြမ်းထားတဲ့ အကြောင်းနဲ့ မှီငြမ်းထားတဲ့ ကဗျာဆရာနာမည်လေးတွေ ထည့်ပေးရင် ပိုပြီးပြည့်စုံတာပေါ့ရှင့်။ သူတို့ စာသားတွေပါနေပြီးတော့ နာမည်မထည့်ထားပေးတော့ သူတို့ကိုလေးစားသမှုမရောက်ပဲ စော်ကားရာရောက်နေမှာစိုးလို့ အကြံဥာဏ်ပေးတာပါရှင်။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ ကျွန်မကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ..ကျွန်တော့်ကို က လိုသွားတာပါ…..အစောကတည်းက မှီငြမ်းကို ထည့်မလို့ပါပဲ…. တင်ချင်စောများပီး..မေ့သွားတာပါ…။ စော်ကားတာလဲ မဟုတ်ရပါဘူး……စော်လဲ မစော်ကားရဲပါဘူး။.သူတို့ကဗျာကို ခုတုံးလုပ်ပီး… အောင်မြင်မှုကို မှိန်းနေတဲ့ကောင်လဲ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ…။ကျွန်တော်က အခု မှဒီလောက အနေနဲ့ဆို အပျံသင်ခါစပဲရှိပါသေးတယ်…။
ဒါဆို မ apil moe ကျေနပ်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
By: finalmutation at Apr 23, 2011
By: moe at May 14, 2011